Libya: D/Soomaaliya oo bilowday inay dib ugu soo celiso dalka qaar kamid ah tahriibayaal ku xiran – idalenews.com
Libya: D/Soomaaliya oo bilowday inay dib ugu soo celiso dalka qaar kamid ah tahriibayaal ku xiran
Ugu yaraan Labaatan Carruur ah oo ka mid ah Dadka ku jira xeryaha qaxootiga Dalka Liibiya kana soo badbaaday Gacanta tahriibiyeyaasha ayaa lagu wadaa in dhawaan lagu soo celiyo Dalkooda Hooyo ee Soomaaliya.
Maryan oo u warrantay laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegtay inay jiraan carruur badan oo la kulmay dhibaatooyin kala duwan, kuwaasoo qaar ka mid ah ay haatan ku guuleysteen inay soo celiyaan dhawaan, halka inta hadhayna ay waqtiyada xiga soo deyn doonaan.
Ergeyga ayaa intaa raacisay in Tahriibayaasha Soomaaliyeed ee ku sugan Liibiya ay halkaasi ku haysataan tacaddiyo ba’an oo xagga nolosha iyo xorriyaddaba ah.
Dadka Soomaaliyeed ee Tahriibta ku tegey Dalka Liibiya ayay ku qiyaastay Kumanaan Qof oo u badan Dhallin yaro, kuwaasoo loo geysto Jirdil Kufsi iyo ciqaabo kulul oo qaarkood ay u dhintaan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa muddadii Sanadka ahayd ee ay jirtay ku dedaashay inay xabsiyada iyo goobaha kale ee lagu haystoba ay kasoo sii deyso Maxaabiis badan oo u xirnaa siyaabo kala duwan.
Turkia:Maxkamad ku taalo dalkas oo lix Wariyaal Xabsi daa’m…..